munyori: Carissa Rawson
musha > Carissa Rawson
7 Nzira To Stay Healthy Nepo Rokufambira
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi With mamiriro yatanga coronavirus kukanda wose urongwa kufamba mu rakati nyangarara, zvingava zvakaoma kuziva kana uchifanira kuchengeta zororo renyu panguva coronavirus kana kwete. Nepo tisingakwanisi kuita kuti sarudzo iwe kana ukasarudza mberi zvakakosha…
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi The Coronavirus nzvongo kwave kukonzera hanya huru nokuda vanhu munyika yose, asi zvichida chimwe chikuru nyaya ndechokuti achitarisana vafambi. Nekuti zvirongwa zvokufamba zvakaoma kuchinja uye matikiti kazhinji kare wakawandirwa, it may make more sense for you…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Saka waita pakupedzisira mazviita. Unofanira kuisa mukati vacation yenyu kubasa, Akatenga wako Ndege matikiti uye vakananga kuna Hungary kuti zvakakodzera pazororo. Uye apo ndicho tsime zvose uye zvakanaka – shure kwezvose, Budapest ndiro guta rakanaka – usazvitengesa…
Ndingawana Kupi Left mukwende Locations In France?
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi France musha zviuru zvinokwezva. Kubva iconic Eiffel Tower muna Paris kusvika pebbled mahombekombe ose Nice, nyika nezvinhu kusingaperi kuita. Asi chii kana uri kushanyira ari layover, kana iwe kare achiongorora kubva hotera yako…
Nguva yekuverenga: 10 maminitsi Rimwe rakajairika uye nyore nzira yokufamba pakati London uye Paris riri nomukombiyuta Eurostar, mukuru-nokukurumidza chitima unobva misoro miviri. Kunyange zvazvo pane imwe plethora zvokusarudza kuti vafambi vachitsvaka kuti hop, the Eurostar remains one of the…
Nguva yekuverenga: 12 maminitsi Mari yekushandisaTakatonyora bhurogu paKutasva nevana muchitima uye akakupa mamwe matipi ekuchengeta vadiki vako vachivaraidzwa. kuverenga mabhuku, kuridza Uno uye kuteerera audiobooks ndechimwe kunofanira nokuti munhu, asi kune matani emapurogiramu ekuti utore…
chitima mari, Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe